Ka qeybqaa dashada bulshada iyo dhaqanka – Bildung und Teilhabe
Sharaxaada ka qeybqaadashada bulshada iyo dhaqanka
Tani waxaa ku jira qaabilaada qarashaadka ka qeybqaadashada bulshada iyo dhaqanka, micnaheeda yahay tabarucida ururka, qidmooyinka muusiga dugsiga ama howlaha firaaqada fasaxyada.
Yaa codsan karo faa’idooyinka?
Carruurta iyo dhalinyarada ka hoosseya 18 sanno, ee hela faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII ee Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
Ma xay la micna tahay “Faa’idada bulshada iyo ka qeybqaadashada”?
Lacag bixinta faa’idooyinkaan waa in ay suurtogal ka dhigtaa in carruurta iyo dhalinyarada ay ku jiraan uruka ciyaaraha, si ay ugu ciyaaraan qalabka dugsiga, si looga qeybgalo fasaxa howlaha firaaqaha iwm. Midaan, lacagta guud ee EURO 10 bishiiba ah ama guud ahaan EURO 120 waxaa la heli karaa sannadkiiba oo loo isticmaali karo waxyaabaha carruurta ay xiiseeyaan.
Tabarucida xubin nimmada ee ka imaaneyso goobaha ciyaaraha, ciyaarta iyo dhaqanka, sida uruka kubada cagta ama cas harada dheesha iwm.
Casharada maadooyinka fanka, sida casharada muusiga ee ka baxsan dugsiga (biibiile, fiyoolin, gitaarka iwm.)
Howlaha la kormeeray ee waxbarashada dhaqanka sida booqashada la jaheeyay ee matxafka iyo koorsada riinjiyeenta iwm.
Ka qeybqaadashada howlaha firaaqada fasaxa sida howsha waqtiga firaaqada dabdamiska ama mashaariicda masraxa oo soconaya dhoor maalmood.
Canugaaga mar hore ma go’aansaday hadduii uu rabo in uu galo urur ciyaaro, ama si uu ciyaaro qalabka, ama ka qeybqaato howsha firaaqada fasaxa? Kadib fadlin gudbi codsi. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaado foomka MACH MIT : : Sport, Musik iyo Freizeiten (Ciyaaraha, muusiga iyo howlaha waqtiga firaaqada) : : foomka “Komm – Mach mit” jeega-buuga iyo buuxi bogga hore ee codsiga.
Fadlan weydii bixiyaha (ururka, dugsiga muusiga iwm.) si loo buuxiyo bogga gadaal ee codsiga. U soo gudbi foomka oo dhameystiran Pro Arbeit.
Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga oo si toos ah ugu wareejinayo lacagta akoonkaaga aad sheegtay haddii la ansixiyo.
Haddii canugaaga uusan weli go’aansan howshu uu rabo in uu isku dayo, waxaad calaameyn kartaa sida xigta bogga koowaad ee MACH MIT : : Sport, Musik iyo Freizeiten (Ciyaaraha, muusiga iyo howlaha waqtiga firaaqada) : :
Codsiga hore ee haynayo dhammaadka waqtiga – weli maan go’aansan ururka/howsha.
U gudbi codsigaan Pro Arbeit. Wadadaan, ma lumineysid wax faa’idooyin ah. Sida ugu dhaqsiha badan ee canugaaga go’aansado, isticmaal foomka codsiga xigga ee "Komm – Mach mit” buuga-jeega iyo usii wad nidaamka sida kore.
Lacag bixinta waxaa loo wareejiyaa si bill-la ah (ugu badnaan EURO 10 bishiiba) ama sida lacagta (ugu badnaan EURO 120) si toos ah akoonka ugu sheegay bixiyaha (bogga gadaal).
Haddii canuga uusan go’aansan weli, lacagta waxaa la keydin karaa ugu badnaan halsanno.